Abahlinzeki beHyaluron Pen neFektri | China Hyaluron Ipeni Abakhiqizi
gcwalisa ipeni le-hyaluron acid ngepeni
IHyaluron ipeni ubuchwepheshe obuphephe kakhulu kunobuchwepheshe bendabuko yenaliti, akukho ukopha futhi Akukho ukuhlukumezeka. Sebenzisa ingcindezi enkulu ukwethula isixazululo esikhumbeni, ukuze isisombululo sisatshalaliswe kahle, umphumela muhle kakhulu, usebenza ngempumelelo ekugcwaliseni izindebe, ekususeni imibimbi njll.
isitayela se-twist hyaluron pen 0.3ml 0.5ml
Le modeli hyapen, ipeni ye-hyaluronic acid kulula ukuyisebenzisa, isitayela se-twist, ungayinquma kalula, iyasebenza ekugcwaliseni izindebe, ukususwa kwemibimbi, umswakama wesikhumba.
I-OEM brand logo eyenziwe ngokwezifiso i-hyaluron acid injector pen
Le peni yemodeli ye-hyaluron iyathengisa kakhulu, inezeluleko ze-0.3 ml noma ze-0.5ml zokukhetha, iyasebenza kumswakama wezindebe, ukususwa kwemibimbi, ukuphakamisa isikhumba, singangeza uphawu lwakho lomkhiqizo.
2 in1 Meso Injection Gun Hyaluron Ipeni 0.3ml & 0.5ml Inhloko Hyaluronic Acid Ipeni Lip Umjovo Anti Umbimbi
Ingasetshenziselwa ukususa imibimbi, ukususa izikhwama zamehlo, ukukhipha izinyawo zamagwababa nomjovo we-hyaluronic acid. Singangeza uphawu lwenkampani yakho esibayeni uma udinga.
ipeni elisha le-hyaluron lokususa imibimbi
Imodeli hyaluron ipeni imodeli yethu entsha olusha, it has 5 izinhlobo imibala. Ingasetshenziselwa ukususa imibimbi, ukususa izikhwama zamehlo, ukukhipha izinyawo zamagwababa nomjovo we-hyaluronic acid. Singangeza uphawu lwenkampani yakho esibayeni uma udinga.